Bit By Bit - နိဒါန်း - 1.4 ဤစာစောင်၏ Themes
စာအုပ်နှစ်ခု themes များ readymades နှင့် custommades နှင့် 2) ကျင့်ဝတ်ရောစပ်) 1 ဖြစ်ကြသည်။
နှစ်ဦးကို themes များဤစာအုပ်ကိုတစ်လျှောက်လုံးကို run, သူတို့သည်ထပ်ခါထပ်ခါတက်လာအဖြစ်သူတို့ကိုသင်သတိထားမိနိုင်အောင်ယခုတွင်ငါသည်သူတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်။ Marcel Duchamp နှင့် Michelangelo: ပထမဦးဆုံးကွီးနှစျနှိုင်းယှဉ်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်သရုပ်ဖော်နိုင်ပါတယ်။ Duchamp ထိုကဲ့သို့သောသူသာမန်အရာဝတ္ထုကို ယူ. အနုပညာအဖြစ်သူတို့ကို repurposed ရှိရာရေပန်း, ကဲ့သို့, မိမိ readymades များအတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများသည်။ Michelangelo, အခြားတစ်ဖက်တွင်, repurpose ခဲ့ပါဘူး။ သူသည်ဒါဝိဒ်၏ရုပ်တုကိုဖန်တီးရန်လိုခဲ့သောအခါသူမျိုးဒါဝိဒ်ကဲ့သို့မကွညျ့ရှုစကျင်ကျောက်တဖဲ့ကိုရခြင်းမရှာခဲ့ဘူး: သူသည်မိမိလက်ရာကိုဖန်တီးရန်အလုပျလုပျသုံးနှစ်ကနေခဲ့ရသည်။ ဒါဝိဒ်သည်တစ်ဦး readymade မျှမက, က custommade (ပုံ 1.2) ဖြစ်ပါသည်။
ပုံ 1.2: Michaelangelo အားဖြင့် Marcel Duchamp နှင့်ဒါဝိဒ်အားဖြင့်ရေပန်း။ စမ်းရေတွင်း၌အနုပညာရှင်တစ်ဦးပြီးသားအနုပညာထိုသို့ repurposes ဖန်တီးမှုပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိကွောငျးအရာတစ်ခုခုကိုရှုမြင်တဲ့ readymade ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖန်တီးခဲ့ကြောင်းအနုပညာဥပမာတစ်ခုရှိ၏ က custommade ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသန readymades နှင့် custommades နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ (။ : အဆိုပါမျက်မမြင်လူသား, အဘယ်သူမျှမ2/ ရင်းမြစ်အဲဖရက်စတစ်ဂလစ်ဇ, 1917 တို့ကရေပန်း၏ဓာတ်ပုံ Wikimedia Commons ) ။ (_Galleria dell'Accademia, Florence / ရင်းမြစ် Jorge Bittner Unna, 2008 တို့ကဒါဝိဒ်မင်း၏ဓာတ်ပုံ Wikimedia Commons ) ။
အဲဒီနှစျခုစတိုင်များ-readymades နှင့် custommades-အကြမ်းဖျင်းဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနအတွက်အသုံးချနိုင်စတိုင်များပေါ်သို့ map ။ သင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဤစာအုပ်ထဲတွင်ဥပမာအချို့ကိုမူလကကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြီးတွေဒေတာအရင်းအမြစ်လိမ္မာပါးနပ် repurposing ပါဝငျသညျ။ သည်အခြားဥပမာများအတွက်, သို့သော်, တစ်သုတေသီတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့ထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်သောဒေတာများကိုဖန်တီးရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက် tools တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာပြုကြတဲ့အခါမှာအဲဒီစတိုင်များနှစ်ခုစလုံးမယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသန readymades နှင့် custommades နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်လိမ့်မည် က Duchamps နှင့် Michelangelo နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျယေဘုယျအား readymade ဒေတာကိုသုံးပါလျှင်, ငါသည်ဤစာအုပ်ကိုသင် custommade အချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးကိုပြလတံ့သောမျှော်လင့်ပါတယ်။ သငျသညျယေဘုယျအား custommade ဒေတာကိုသုံးပါလျှင်ထိုနည်းတူ, ငါသည်ဤစာအုပ်ကိုသင် readymade အချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးကိုပြလတံ့သောမျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ငါသည်ဤစာအုပ်သင်တို့သည်ဤနှစ်ခုစတိုင်များပေါင်းစပ်ပြီး၏တန်ဖိုးကိုပြလတံ့သောမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ယောရှုသည် Blumenstock နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Duchamp နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Michelangelo ကြ၏ (က custommade) သူတို့ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ (က readymade) repurposed မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စစ်တမ်း data တွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ readymades နှင့် custommades ၏ဤ blending သင်ဤစာအုပ်ကိုတစ်လျှောက်လုံးတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်၏ ဒါကြောင့်လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်အချက်အလက်သိပ္ပံနှစ်ဦးစလုံးထံမှအကြံဥာဏ်များလိုအပ်လေ့ရှိတယ်, အဲဒါကမကြာခဏစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးသုတေသနစေပါတယ်။
ဤစာအုပ်ကတဆင့် run သောတစ်ဦးကစက္ကန့်ဆောင်ပုဒ်ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသုတေသီများစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အရေးကြီးသောသုတေသနပြုဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်၏စွမ်းရည်များကိုသုံးနိုင်သည်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါသည်ဤအခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ယူသူကိုသုတေသီများခက်ခဲကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။ အခန်း6ကျင့်ဝတ်ဖို့လုံးဝကျိန် ဆို. ပူဇော်ပါလိမ့်မည်, သို့သော်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်အတွက်ကျင့်ဝတ်သုတေသနဒီဇိုင်းတစ်ခုတိုးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအခန်းကြီးသို့ကျင့်ဝတ်ပေါင်းစပ်။
Blumenstock နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လုပျငနျးကိုထပ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 1.5 လူဦးရေသန်းထံမှ granular ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းသုတေသနပြုမှုအတွက်အံ့သြစရာအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးပေမယ့်လည်းထိခိုက်မှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ယောနသန်သည် Mayer နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (2016) ပင် "အမည်ဝှက်" ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ (အမည်များနှင့်လိပ်စာများမပါဘဲဆိုလိုသည်မှာ, ဒေတာ) ကိုဒေတာအတွက်တိကျသောကလူကိုသိရှိနိုင်ဖို့နှင့် ပတ်သက်. ထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်များအခြနိုင်ရန်အတွက်အများပြည်သူရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပြခဲ့ကြ ထိုကဲ့သို့သောအချို့သောကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များသည်အတိုင်းသူတို့သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, Blumenstock နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များမည်သူမဆိုအကြောင်းကိုအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်အခြကြိုးစားခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေသူတို့ကိုခေါ်ဆိုမှု data တွေကိုဆည်းပူးရန်အဘို့အခက်ခဲကြီးနှင့်၎င်းတို့၏သုတေသနပြုပို့ချစဉ်ကကျယ်ပြန့်အကာအကွယ်ယူမှသူတို့ကိုအတင်းအကျပ်ကြောင်းဆိုလိုသညျ။
ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများအသေးစိတ်တဘက်, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနတွေအများကြီးမှတဆင့် run သောအခြေခံတင်းမာမှုလည်းမရှိ။ သုတေသီများ-မကြာခဏကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများ-ရှိသင်တန်းသားများကို၏ဘဝကျော်အာဏာကိုတိုးမြှင့်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ။ သောတန်ခိုး, ငါသည်သူတို့၏ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ပင်အသိပညာမပါဘဲလူတွေကိုအမှုတို့ကိုပြုနိုင်စွမ်းကိုဆိုလိုတာ။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများသည်ယခုလူသန်းပေါင်းများစွာ၏အပြုအမူကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ, ငါအကြာတွင်ဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်အဖြစ်, သုတေသီများကိုလည်းအကြီးအကျယ်စမ်းသပ်ချက်အတွက်လူသန်းပေါင်းများစွာစာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ဤအရာအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်လူတို့သဘောတူညီခကျြသို့မဟုတ်အသိအမြင်မရှိဘဲဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ သုတေသီများ၏တန်ခိုးတိုးပွားလာနေသည်နှင့်အမျှအာဏာကိုအသုံးပြုရပါမည်ဘယ်လိုရှင်းလင်းပြတ်သားတစ်ခုညီမျှတိုးပေးခြင်းမရှိပေ။ တကယ်တော့သုတေသီများကိုက်ညီမှုများနှင့်ထပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ဥပဒေများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့အာဏာကိုကငျြ့သုံးဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရပေမည်။ အစွမ်းထက်စွမ်းရည်နှင့်မရေလမ်းညွှန်ချက်၏ဤပေါင်းစပ်ခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူထွေးဖို့ကိုတောင်ကောင်းကောင်းအဓိပ္ပာယ်သုတေသီများအတင်းနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်လူမှုရေးသုတေသနအသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးပုံကိုဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်လျှင်, ငါသည်ဤစာအုပ်သည်ဤအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းအသစ်သောအန္တရာယ်များကိုဖန်တီးသောသင်ပြလတံ့သောမျှော်လင့်ပါတယ်။ သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်ထိုအအန္တရာယ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလျှင်ထိုနည်းတူ, ငါသည်ဤစာအုပ်ကိုသင်အချို့အန္တရာယ်များကိုမလိုအပ်စေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းများ-အခွင့်အလမ်းများကိုကြည့်ရှုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ငါသည်ဤစာအုပ်တွင်လူတိုင်းတာဝန်သိဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်လူမှုရေးသုတေသနအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအန္တရာယ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အာဏာကိုတစ်ဦးတိုးနှင့်အတူ, ထို့အပြင်တာဝန်တစ်ခုတိုးလာရှိလာရပေမည်။